Monkey - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
Zibalelwa kwinani elingapha kwama 250 indidi ezahlukeneyo zenkawu ehlabathini, zohlukene ngobukhulu ukusuka kwi Pigmey Marmoset eku 15cm ukuya kwi Mandril ephantse yalingana nemitha ngobude.
Kusekhona ke ukubhideka kwinkcazelo ye nkawu neye mfene nokwahlukana kwendlela ezahlulwa ngayo ngamaqela ohlukeneyo. Inkawu zizisa ulonwabo olunomtsalane kubatyeleli be safari e Afrika, nangona intlonti yazo maxa wambi kwakunye nemikhwa yazo ebufana naleyo yabantu.
Zizisa ulonwabo ngokuqinisekileyo, kodwa ke zingabakwalilo nezothe entweni edibene abantu nokutya. Axhaphakile amabali we nkawu ezisokolisayo kwindayo eziqashisayo zokuhlala nakwi ndawo zenkampu e Afrika, apho zigqugqisa amagumbi okutyela neentente zikhangela ukutya.
Ithi yakuqala lengxaki yeimfene kwezindawo, kubanzima ukuba iphele kuba lomkhwa ugqithiselwa kwisizukulwana ngasinye esilandelayo. Eyona nkawu igcwele iindawo ezininzi e Afrika ibizwa ngokuba yi Vervet monkey, ungafunda kabanzi nange Samango Monkey.